Indlela i-Hornbeck eyayisiza ngayo Omnye uxhatshazo othunjiweyo ubalekela efanayo
Kwakuyinto ephazamisayo eyabangela impendulo yempembelelo nakwii-apolisa zamandulo ezazenzayo. Ukukhangela inkwenkwe eyayibanjwe iintsuku ezine ngaphambili, yafumana enye inkwenkwe eyayiswelekile iminyaka emine. Kodwa ukufunyanwa ngokumangalisayo komntwana olahlekileyo ngokukhawuleza wakhulisa imibuzo eninzi njengoko iphendulwe.
NgoJanuwari 12, 2007, uphando malunga nokunyamalala kwenkwenkwezi eneminyaka engama-13 ubudala yaseMissouri owagqitywa ekugqibeleni ibonwa iintsuku ezine ngaphambi kokuphuma kwibhasi yesikolo, kwaphumela ekufumaneni uShawn Hornbeck, 15, kwindlu efuphi naseSt.
Amapolisa akhonza isigunyaziso sokubanjwa kwindlu yokuhlala yomnye umntu obonayo iloli elimhlophe elihambelana nokuchazwa komntu oyedwa ekufunyanweni kwaBen Ownby, owagqalwa ekugqibeleni kufuphi nekhaya lakhe eBeaufort, eMissouri, malunga neekhilomitha ezingama-60 kumzantsi-ntshona weSt ULouis.
Kutheni Akazange Aphunyuke?
Xa amapolisa ayesenza isigunyaziso sokwenza uphando kwihostela kaMichael Devlin, abalwe njengomnini weloli, bayifumana uBen Ownby kunye no-Hornbeck, owaphela ngo-Oktobha 2002 xa ekhwele ibhayisikili eRichwood, eMissouri, malunga neekhilomitha ezingama-50 kumzantsi-ntshona weSt ULouis.
Ngokukhawuleza kwaphakanyiswa imibuzo malunga nendlela i-Devlin yakwazi ngayo ukubamba uShawn Hornbeck kwindlu yokuhlala iminyaka emine ngaphandle kokuba akwazi ukuhamba , nangona wayenamathuba amaninzi okubaleka.
Abamelwane babika ukuba bebona i-Hornbeck encinci ixhomeke ngaphandle kwendawo yokuhlala yayo, engabonwayo. Kwakhona wayeza kuhamba ngezitrato ezakhelene naye kwi-skateboard yakhe okanye ngebhayisikili, yedwa okanye kunye nomhlobo osuka kwinkxalabo.
Xa wayesondele ixesha lokufumana ilayisenisi yokuqhuba, abamelwane babone i-Devlin bemnika izifundo zokuqhuba. Abaninzi becinga ukuba babe nguyise kunye nendodana.
U-Hornbeck wadibanisa namapolisa amane ngexesha lokuthunjwa kwakhe. Ngesinye isikhathi wathetha namapolisa emva kokuba yena kunye nentombi yakhe befumene ukuba ibhayisikili yakhe ibanjwe ngelixa limi ngaphandle kwendawo yokuthengisa.
Kwakhona wayenakho ukufikelela kwikhompyutheni aze athunyelwe kwiwebsite eyinikezelwe ku-Hornbeck ukuba abazali bakhe babeke. Wabuza kwithuba lakhe ukuba bahlala bekhangela unyana wabo kangangokuba wayesayine igama elithi Shawn Devlin.
Kutheni akazange abaleke? Kutheni engazange afune uncedo?
Xa uMichael Devlin ecela ityala ngamagumbi amane enkundla ukuba ahlawulwe iintlawulo eziphathelele ukuthumba nokubetha abafana, izimpendulo zale mibuzo zityhilwa.
Kungekudala emva kokuba uD Devlin abanjwe nguP Hornbeck, emva ko-2002, wayeceba ukumbulala inkwenkwe emva kokuphindaphindiweyo ngokwesondo. Wathabatha uShawn waya eWashington County kwilori lakhe, wamkhwelisa eloli waza waqala ukumbamba.
"Ndizama ukubulala (uShawn) kwaye wandixoxela kuwo," kusho uDonlin. Wayeka ukukrazula le nkwenkwana waza wamhlasela ngokwesondo. Kukuphi na abashushisi ababiza ngokuba "ukusebenzisana nomtyholi," uShawn watshela iDivlin ngelo xesha ukuba uya kwenza nayiphi na into ayifunayo ukuba aphile.
"Sazi ngoku iinkcukacha ezenza ukuba angabaleki," watsho u-Shawn, uyise wesibini, uCraig Akers.
Kule minyaka, i-Devlin isebenzisa iindlela ezininzi zokulawula uShawn. Iinkcukacha zokuxhaphazwa kukaShawn zinyamezeleke kakhulu kwaye zibonakalise ukuba zingakhange zikhutshwe ngamaziko amaninzi eendaba, nangona iingxelo zifumaneka ngokulula.
I-Devlin yavunyelwa ukwenza iifoto zoononografi kunye neevidiyo ze-Shawn kwaye zithatha imigca yelizwe ukuba ihlanganyele kwizenzo zesondo.
Ukuze aqhubeke nokulawula u-Shawn, u-Devlin wamthabatha xa ebamba uBen Ownby ngoJanuwari 2007, etshela uShawn ukuba ngenxa yokuba wayekulo lori wayencedisa ulwaphulo-mthetho.
USmith Protected Ben Ownby
Amagunya athi uShawn wayeyiqhawe, ozama ukukhusela uBen Ownby ekubandezelekeni ayekunyamezela. Devlin watshela uShawn ukuba uceba ukubulala eyakhe emva kokugcina ixesha elifutshane.
"Ndicinga ukuba uShawn Hornbeck uyinkunzi," u-Ethan Corlija, omnye wabameli be-Devlin, utshele abaphephandaba. "Ngokuqinisekileyo wayezibethe ngekrele ngamaxesha amaninzi kangangokuba uBen wayengeke adlulwe nantoni na ehluthweni olungathandekanga."
I-Devlin yangena enyanzelweni yecala kwiintlawulo ezininzi kwiinkundla ezine ezahlukeneyo.
Ekugqibeleni, wayefumana izigwebo zobomi ezingama-74 ukuba asebenze ngokulandelelana, okuya kumgcina entolongweni ubomi bakhe bonke.
"Siyathokoza kakhulu le nto yiphumo, ukuba i-monster ikhonjiwe kwaye iya kuhlala ihleli," kusho uCraig Akers.
IYunivesithi yeSan Francisco GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukuqonda iindlela zeClasph Class